"Tuapse-एडलर" - बित्तिकै सबै प्राप्त?
"Tuapse-एडलर" - छोटो मार्ग। को बस्तियों बीच दूरी 119 किलोमिटर (ट्रयाकको) छ। एक सीधा लाइन मा एक सानो कम - 77 कि। तथापि, यस्तो तरिकाले पारित गर्न यो किनभने सोची Tuapse एक बाटो सफल छैन - धेरै बस्तियों प्रमुख, को Serpentine। यसलाई चाँडै दूरी हटाउन सम्भव छ जो तरिका बताउन आवश्यक छ।
यो दूरी, "Tuapse-एडलर" रूपमा आफ्नो कार मा हटाउन सकिन्छ। यो तरिकाबाट विशेष गाह्रो छैन। मार्ग सजिलो, कसैले लागि विशेष गरी जो क्रास्नोडार क्षेत्र मा भयो। यो यस्तो Giselle Dere, Dederkoy र Shepsi रूपमा सहर मार्फत बित्दै। सोची देखि बाटो मा पनि Lazarevskoye पास हुनेछ। तर, यो गाउँ, साथै यसको सदस्य शौचालय Vardane Dagomys र महान् सोची भाग हो।
दूरी "एडलर-Tuapse" विजयी, तपाईं क्षेत्रमा सडक आफ्नो तेज पालैपालो लागि जानिन्छ रूपमा, रूपमा होसियार ड्राइभिङ हुन आवश्यक छ। सोची -, यो बाटो PGT Dzhubga देखि मा हिमालहरू धेरै नजिक स्थित एक शहर, ताकि, एक खतरनाक Serpentine झेल्नुपर्छ। यो सडक त्यहाँ साँच्चै गाह्रो र जोखिम लायक छैन किनभने कम गति पालना गर्नुपर्छ।
समय र लाभ
त्यसैले, भन्नुभयो गरिएको छ रूपमा, सोची र Tuapse देखि दूरी 119 किलोमिटर छ। यस बारे 30-40 मी को kilometrage थप गर्नुपर्छ। मार्ग, "एडलर-Tuapse" को दूरी प्राप्त गर्नुहोस्। यो एक रोचक nuance टिप्पण लायक छ। धेरै मानिसहरू एडलर अलग शहर विश्वास गर्छन्। वास्तवमा, पहिले यो थियो। तर त्यसपछि, सरल बनाउन, एडलर महान् सोची मा शामिल थियो। र अहिले यो - छुट्टै क्षेत्र। एडलर देखि सोची सहज र अर्को एक ठाउँबाट प्राप्त गर्न सडक आधा घण्टा अधिकतम हुन सक्छ। र त तपाईं Tuapse मा शहर र SENT छोड्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै गर्छन्। सोही, यो Tuapse मा बाटो उल्लेख गर्न अर्को सानो nuance टिप्पण लायक छ। हवाई अड्डा "एडलर" - धेरै मान्छे किनभने यो शहर जानुहोस्। खैर, यो समय मा पहिलो बिसौनी "सपिङ्ग सेन्टर" नयाँ आयु "जान्छ कि एक बस लिन हुनेछ, र त्यहाँ टिप्पण 124th वा 125th, सीधा सोची पठाइएको मा reseeding लायक छ। पहिले नै चुपचाप तपाईं हो, प्रसंगवश एउटा बस टिकट, Tuapse र अन्य नजिकका शहर प्राप्त गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय र बहुमुखी तरिका लाग्न सक्छ।
चाँडै र cheaply
बस जान - दूरी "एडलर-Tuapse" एक सरल र धेरै लोकप्रिय तरिका हुन सक्छ। टिकटको सोची को बस स्टेशन लगियो हुनुपर्छ। यसलाई सस्तो लागत, र अपेक्षाकृत छिटो पुग्न सकिन्छ - तीन चार घण्टामा। यो यस्तो ठाडो Serpentine थिएनन् भने, यो बाटो साथ गिरा न्यूनतम दोहोरो थियो। तपाईं वस्तुतः कुनै पनि बस मा Tuapse प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले enviable नियमित जाने - प्रत्यक्ष र जा दुवै। तर जो कोहीले - Primorsko-Akhtarsk, क्रास्नोडार, Temryuk, नोवोरोसीस्क, Dzhubga, रोस्तोव-मा-डन, मखाचकला, ओडेसा, Nalchik, Astrakhan, किसिनो, क्रिमीआ, आदि सामान्य गर्न, सोची देखि आ सबै बसें, उपयुक्त हो .. ।
"उडान" "निल्छ" गर्न
त्यहाँ एक बिन्दुबाट अर्को प्राप्त गर्न अर्को लोकप्रिय तरिका हो। तालिम "Tuapse-एडलर" चाँडै यात्रु तिनीहरूलाई लागि उचित ठाउँमा हुनेछ। 21:10 मा देखि अन्तिम उडान गर्न 4:18 pm - तिनीहरूले अक्सर जानुहोस्। मात्र 8 गाडिहरु। तिनीहरूले3घण्टा र9मिनेट सम्म जानुहोस्। तिनीहरूलाई को तेज को Tuapse 2.5 घण्टा हुन्छ, र यो एडलर विमानस्थल आउँछ।
तर, यो अधिक महंगा "निल्छ" यात्रा गर्नुपर्छ। वयस्क टिकट - 400 rubles र छोराछोरीलाई - 100 तर यसरी रूपमा चाँडै सकेसम्म आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न आवश्यक गर्नेहरूलाई मानिसहरू हुन्। सामान्य मा, मान्छे निर्णय गर्नेछ उहाँले चयन कि सबै भन्दा महत्वपूर्ण - विकल्प छन्। समस्या सडक सम्बन्धित किनभने, अरू कुनै एक हुनुपर्छ। सफल सडक!
Yasenskaya पार: यसको बारेमा बिदा र समीक्षा
मास्को मा Gagarin Manor। शहर हवेली Gagarin
Istra - मास्को मा नदी
Forwarder - सामान को यातायात को संगठनमा एक अपरिहार्य लिंक छ
Flycatcher - एक झिंगा र Cockroaches हत्या कि कीरा
"Renome" - एक उधारो शब्द। यो कस्तो अर्थ राख्छ?
रूस मा नागरिक युद्ध बारे खेल: समीक्षा
संसारमा सबभन्दा छोटो युद्ध। एंग्लो-जन्जिबार युद्ध: कारणहरू र परिणाम
APM कर्मचारी: डिकोड, संरचना र कार्य